Tarii carraan bara Chaartarii sun ammas mudachuu malaa? – Rabira News
February 18, 2021 Bonsa
Tarii carraan bara Chaartarii sun ammas mudachuu malaa?
Dureen dhaaba kanaa akka jedhaniitti erga gara biyyaatti deebi’anii waggoota lamaan darbaniif akkuma bara Chaartarii sana dhiibamaa jiraachu himu.
Kanaafii gaaffii dhaabichi tarii akkuma bara Chaartarii sana filannoo baranaa keessaa bahuu danda’aa? jechuun gaafatamaniif, Obbo Daawud akkas jedhan:
”Bara Chaartarii ABO’n Oromiyaa keessatti deeggaraa hin qabu jedhanii chartara seensisan. Yeroo gabaabaatti filannoon yaalii gaggeeffamee % 94n mo’ate. Finfinnee keessatti barcuma 12 ol argate. Kun isaan rifachiise.”
Booda ”waajjira cufuu, deeggartootatti dhukaasuu, hidhuu, bakka waraanni jirutti haleeluun shororkaa uumaa turan. Waraanni kaampii akka galu waliigalame. Mootummaan Eertiraa fi ambsaadarri Ameerikaa bakka jiraniitti, tole jennee mooraatti deebisnaan ammoo didanii lola banan,” jedhan Obbo Daawud.
Kanumaan warri as jirtan biyyaa bahaa, kaan silaa lola seenani jechuun humnaan dhiibamnee biyyaa baane jedhan.
Published by Bonsa
Rabira News: dhimmaa Uummataa Oromoo qofa irraattii kan xiyyeeffatudha.Akkasumas seena darbeefi haala yeroo ammaa odeeffannoo argate kan dabarsudhaa.	View all posts by Bonsa
Previous Filannoo Itoophiyaa 2021: ABOn yeroo lammaffaaf siyaasa Itoophiyaa keessaa ‘dhiibamaa’ jiraa
Next Obbo Qajeelaa Mardaasaa: ABOn sababa waldhabdee keessootiin qophii filannoo waan hin taasisneef yeroon kaadhimtootaa dhiyeessu akka dheeratuuf gaaffii dhiyeessera jedhan Hoogganaan sab-qunnamtii ABO